Daacish oo la wareegtay gacan ku heynta deegaanka Qandala ee gobolka Bari - Hablaha Media Network
Daacish oo la wareegtay gacan ku heynta deegaanka Qandala ee gobolka Bari
HMN:- Ciidamo la rumeysan yahay iney ka tirsan yihiin kooxda Daacish ayaa la wareegay gacan ku heynta degmada Qandala ee gobolka Bari.
Wararka aan ka heleyno magaalada Qandala ayaa sheegaya in ciidamada oo lagu qiyaasay 80 dagaalyahan iney la wareegeen gacan ku heynta degmadaasi oo ka tirsan gobolka Bari.
Degmada Qandala ayaa qiyaas ahaan 75 km u jirta magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, mana jiraan ciidamo ka tirsan Puntland oo ku sugnaa deegaankaasi sida dadka deegaanka ay sheegeen.
Jaamac Axmed Khuurshe oo ah gudoomiyaha degmada Qandala ee gobolka Bari ayaa xaqiijiyay waaberigii saaka ciidamada Daacish ay la wareegeen deegaanka iyagana ay isaga baxeen degmadaasi, sida uu sheegay.
Ciidamada ayaa waxaa hogaaminaya Sheikh C/qaadir Muumin oo ku dhawaaqay inuu wakiil Daacish kaga yahan deegaanada Puntland gaar ahaan buuraha Galgala.
Deegaanka Qandala ayaa ah magaalo xeebeed, ka tirsan gobolka Bari.
Ciidamada ayaa la sheegay iney fariisin ka dhigtaan Daarta Cad oo ah goob magaalada caan ku tahay.